မန္တလေးမြို့ ဗြိတိသျှကောင်စီတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် TKT Preparation သင်တန်း - Myanmar Network
မန္တလေးမြို့ ဗြိတိသျှကောင်စီတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် TKT Preparation သင်တန်း
Posted by Aye Kyu on August 29, 2012 at 17:08 in British Council in Mandalay
မန္တလေးမြို့ ဗြိတိသျှကောင်စီတွင် TKT Preparation သင်တန်းဖွင့်မည်
မန္တလေးမြို့ ဗြိတိသျှကောင်စီတွင် TKT (Teaching Knowledge Test) Preparation သင်တန်းကို စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် တက်ရောက်လိုသူများ မန္တလေးမြို့ ဗြိတိသျှကောင်စီ၊ တိုက်အမှတ် ၆/၇၊ SY ဝင်း၊ လမ်း ၃၀ (၇၇ နှင့် ၇၈ လမ်းကြား) သို့ လာရောက်စာရင်းပေးနိုင်ပါပြီ။
ဘွဲ့ရပြီးစိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်သည့် အဆိုပါ နာရီ (၉၀) ကြာသင်တန်းတွင် (၂၀) ဦး သာလက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့ မှ ဒီဇင်ဘာလ (၁၅)ရက်နေ့အထိ စနေ/တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသိလိုသည်များကို တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၁၁ ၂၀၃ ၁၁၄ သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Permalink Reply by Ummay Ayman on August 30, 2012 at 9:37
Thank you for sharing sayar. I will help you in sharing this on Facebook. Haveagreat day :)
Permalink Reply by Aye Kyu on August 30, 2012 at 10:04